Fanompoan-tsampy - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Mpanompo sampy)
Ny fanompoan-tsampy dia fivavahana amin'ny sarin-javatra. Nefa ho an'ny fivavavahana jiosy sy kristiana ary silamo dia fanompoan-tsampy koa ny fivavahana amin'ny zavatra iray na inona na inona izay tsy Andriamanitra na ny fivavahana amin'andriamanitra tsy izy. Matetika ny fanompoan-tsampy dia miseho amin'ny alalan'ny fivavahana amin'ny masoandro na amin'ny volana na amin'ny kintana na zavatra hafa izay anaovana fanompoam-pivavahana sy sorona sy fanatitra ary vavaka.
Niely teo amin'ireo sivilizasiona malaza taloha toa ny an'ny Babiloniana sy ny Ejipsiana sy ny Grika sy ny Hindoa ary ny Romana ny fanompoan-tsampy. Ny fivavahana amin'ny sampy dia tafiditra tao amin'ny vahoakan'i Israely noho ny fifaneraserany tamin'ny kolontsaina babiloniana sy ejipsiana ary tsy voatohitra izany raha tsy teo ny fiezahan'ireo mpaminany izay nandrara ny Hebreo tsy hanompo sarin-javatra. Tsy mankasitraka ny fanompoan-tsampy ny fivavahana kristiana ka misy ireo izay nanao sy mbola manao ny hampihena na ny tsy hampisy mihitsy ny fampiasana sary masina amin'ny fivavahana kristiana.
Ny fanompoan-tsampy dia fahasimban'ny fivavahana sy fialana amin'ny fivavahana marina araka ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny finoana silamo ka tokony hiadiana; fialana amin'ny lalana tena izy ny fanompoan-tsampy.
Talohan'ny nidiran'ny fivavahana kristiana sy silamo teto Madagasikara dia nanjaka teo amin'ny sokajin'olona rehetra, hatramin'ny olon-tsotra ka hatramin'ireo mpanjaka, ny fanompoan-tsampy ary mbola be mpanaraka izany hatramin'izao, amin'ny maha isan'ny fivavahan-drazana malagasy azy.
1 Amin'ny fitenim-pirenena samihafa
1.1 Fiteny semitika:
1.2 Fiteny indo-eoropeana
1.3 Fiteny aostroneziana
Amin'ny fitenim-pirenena samihafaHanova
Izao avy ny teny ilazana ny fanompoan-tsampy amin'ny fitenim-pirenena sasantsasany:
Fiteny hebreo: עבודה זרה / avodah zarah.
Fiteny arabo: شرك‎/ shirk; ny mpanompo sampy dia atao hoe mushrik (raha tokana) na مشركون/ mushrikûn (raha maro) izay midika hoe "mpampifangaroharo (andriamanitra hafa amin'Andriamanitra)" sady ilazana ny mpanompo sampy sy ny mpivavaka amin'andriamanitra maro (politeista).
Mitovitovy endrika ny teny ilazana ny fanompoan-tsampy amin'ny ankamaroan'ireo fiteny indo-eoropeana indrindra fa ireo naka avy amin'ny fiteny grika sy latina.
Fiteny grika: εἰδωλολατρία / eidôlolatria. Io teny io dia avy amin'ny fanakambanana ny hoe εἴδωλον / eidôlon "sary" sy ny hoe λατρεία / latreia "fivavahana" na "fanompoana".
Fiteny latina: idololatria na idolatria (taty aoriana, ao amin'ny Volgata) Io teny io dia avy amin'ny teny grika hoe εἰδωλολατρία / eidololatria.
Fiteny frantsay: idolâtrie.
Fiteny anglisy: idolatry.
Fiteny espaniola: idolatría
Fiteny alemàna: Götze
Fiteny rosiana: идолопоклонство / Idolopoklonstvo, идолопокло́нничество / idolopoklо́nnitshiestvo na идолослуже́ние / idolosluženie.
Fiteny malagasy: fanompoan-tsampy; fivavahana amin'ny sary
Fiteny indoneziana: penyembahan berhala
Fiteny maley: berhala
↑ Jereo eto ny fanononana.
↑ Jereo eto ny fomba famakiana azy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanompoan-tsampy&oldid=996020"
Dernière modification le 2 Aogositra 2020, à 18:48
Voaova farany tamin'ny 2 Aogositra 2020 amin'ny 18:48 ity pejy ity.